Maitiro ekudzima iyo nhoroondo yewebhu yedu browser | Linux Vakapindwa muropa
Maitiro ekudzima nhoroondo yewebhu webhu
Iyo webhu bhurawuza yave chishandiso chakakosha kune chero mushandisi uye kune chero anoshanda masisitimu. Ndokusaka paine akawanda ma tutorials ayo anotaura nesu uye anotiudza maitiro ekugadzirisa uye kuchengetedza ichi chakanakisa chishandiso.
Ino nguva isu tichaenda kukuudza maitiro ekudzima nhoroondo yeedu webhu bhurawuza, yakapusa uye yakakosha basa rekuita chaiko kushanda kwewebhu kubhurawuza. Kusvetuka iri basa kunogona kukonzera chirongwa ichi chinomhanya zvishoma uye chakanyongana Kana zvisiri chete isu tisina kudzima iyo nhoroondo asi zvese izvo zvinounza nayo, mafaera uye cache.
Uye zvakare, isu hatizongoona maitiro aya mune imwechete yewebhu browser asi isu tichazviona mune akati wandei mabhurawuza. Kunyanya tichaona maitiro ekujekesa nhoroondo muFirefox, Chromium, Akashinga uye iyo nyowani Falkon. Iwo ndiwo makuru mabhurawuza ewebhu asi ichokwadi kuti havazi ivo chete vanoshanda nenhoroondo kana ivo chete avo vanokutendera kuti ubvise iyo nhoroondo, asi iwo ndiwo anozivikanwa uye anoshandiswa mabhurawuza ewebhu muGnu / Linux nyika. .
Kune avo vari vashandisi vevashandi, isu tinofanirwa kutaura izvozvo iyo nhoroondo ndeye kubhurawuza mushumo wewebhu browser. Chirevo chekuti muzviitiko zvakawanda hachiuye chega asi chinounza iyo url yewebhu peji, maokie eiri peji rewebhu uye kunyange zvimwe zvinhu zvewebhu peji senge mifananidzo, fomu data kana data kubva kuitikokupedzisa maitiro. Izvi zvishoma nezvishoma zvinoita kuti webhu bhurawuza izadze uye ive inorema. Nekudaro kukosha kwekujekesa nhoroondo.
2 Chromium / Chrome
4 Falkon (yaimbozivikanwa seQupzilla)
5 Izvi zvese?
Maitiro ekujekesa nhoroondo mukati meMozilla webhu browser ibasa rakareruka. Kutanga isu tinofanirwa kuenda kumusoro kwekurudyi uye tinya pane icon yemabhawa akati wandei. Mune menyu inoratidzika tinoenda kune Zvaunoda. Iwindo rakadai rinozoonekwa. Mariri tinoenda kusarudzo Kuvanzika & Kuchengetedzwa uye kurudyi tichaona zvese zvine chekuita neiyo Nhoroondo. Tichaona bhatani rakakura rinonzi "Bvisa Nhoroondo". Izvi zvichabvisa nhoroondo yese yewebhusaiti yedu. Asi usati waidzima zvachose, hwindo senge rinotevera richaonekwa:
Isu tinotara iyo nguva yenguva yatinoda kudzima uye tinya bhatani kujekesa nhoroondo.
Kusiyana nemamwe mabhurawuza, Mozilla Firefox inotibvumidza kugadzirisa zvinhu zveiyo nhoroondo yatinoda kudzima kana kwete. Pachiratidziro chinowoneka mushure mekutsikirira Zvekuvanzika & Chengetedzo (ona pamusoro kuti uzive nzira yekuenda ikoko) tinowana sarudzo dzinoverengeka dzatinogona kutarisa kuti tishandise kana kumisa. Pano tinokuudza zvavanoreva:
Permanent zvakavanzika kubhurawuza maitiro: Iyo yekufambisa iyo yatinoita haina kuzivikanwa uye zvimwe zvinhu zvakaita semafomu, makuki, nezvimwe .. hazvina kuchengetwa muwebhu browser.
Rangarira yekutsvaga uye fomu nhoroondo: Iyi sarudzo inoyeuka mafomu atakashandisa pamwe nekutsvaga kwakaitwa munzvimbo dzekutsvaga.
Bvisa nhoroondo kana Firefox yavhara: Iyi sarudzo inotibvumidza kuchenesa kubhurawuza pawebhu kana tangovhara webhu bhurawuza. Kana isu tikamaka iyi sarudzo, isu tinofanirwa kudzvanya bhatani rekumisikidza kuratidza kuti ndezvipi zvinhu zvichabviswa uye ndezvipi zvisiri.
Uye pamusoro pezvese zvinhu isu tichava nemenyu inodonhedza pasi iyo ichatibvumidza isu kuyeuka iyo nhoroondo, kwete kuirangarira kana kushandisa yakasarudzika dhizaini.
Kana tikashandisa Google Chrome kana Chromium, maitiro acho ari nyore, asi pachezvangu zvinoratidzika kwandiri kuti hazvina kukwana kupfuura muMozilla Firefox.
Mune ino webhu browser isu tine mbiri sarudzo dzekudzima nhoroondo. Chekutanga chingave chekudzvanya mubatanidzwa "Ctrl + H" uye nhoroondo yewebhu webhu ichaonekwa. Kudivi rekuruboshwe tichaona sarudzo inoti "Deleting browsing data" iyo sarudzo ichabvisa nhoroondo yese yewebhu browser.
Pane imwe nzira yekuzadzisa iri basa. Tinofanira kuenda kuZvirongwa uye pakati pesarudzo dzese dzatinofanira kuenda kuChenesa kubhurawuza data mushure meizvozvo hwindo senge iri pazasi rinozoonekwa. ichatibvumidza isu kugadzirisa mamiriro enhoroondo isu atinoda kudzima kana kubvisa.
Maitiro acho akangoreruka asi asina kukwana seMozilla Firefox.
Mukati meiyo Shinga webhurawuza, iyo nzira yekujekesa nhoroondo iri nyore kwazvo uye yakapusa sezvazvinoitika muChromium. Kuchenesa nhoroondo isu tinofanirwa kuenda kuZvirongwa kana Zvaunoda. Iwindo rakadai rinozoonekwa:
Mariri tinoenda kuSecurity sarudzo uye mairi tinotara sarudzo dzatinoda kuchenesa kana kudzima, kusanganisira nhoroondo. Mushure mekumaka sarudzo dzatinoda kudzima, tinofanirwa kubaya bhatani "Delete navigation data now ..."
Uye neizvi, nhoroondo yekutsvaga mubrowser yedu Yakashinga ichabviswa.
Falkon (yaimbozivikanwa seQupzilla)
Bvisa nhoroondo muFalkon kana zvakare inozivikanwa se Qupzilla zvakaoma zvakanyanya asi zvinoshanda seimwe nzira. Mune ino kesi, isu zvakare tine nzira mbiri dzekubvisa kana kudzima iyo yekutsvaga nhoroondo Iyo inokurumidza uye yakapusa nzira ndeyekutsikirira lyakakosha mubatanidzwa Ctrl + Shift + Del. Izvi zvichabvisa yese nhoroondo yatinayo muwebhu browser. Asi, semamwe mabhurawuza, kuburikidza nemaSystem kana Kugadziriswa tinokwanisa kudzima iyo nhoroondo kana kugadzirisa basa iri.
Mukati mezvirongwa tinoenda kune iyo Navigation tab. Iyo tabo iyo inoratidza inotevera hwindo:
Iye zvino tinoenda kunzvimbo yekuchengetera yemuno tosarudza sarudzo dzatinoda, ndiko kuti, kana tichida kuti Qupzilla ibvise nhoroondo kana tavhara, kana isu tichida kuti cache ichengetwe, kana isu tichida kuchengetedza iyo nhoroondo kana kwete, nezvimwe ... Kana tese tagadzirira, tinoenda kubhatani rekushandisa uye tinya bhatani rekutambira kuti gadziriso ishandiswe. Nezve izvi tichave takadzima nhoroondo uye kana isu takamaka, cache yemapeji ewebhu atakashanyira kana kusevha.
Kwete, hazvisi zvese, asi sekutaura kwatamboita ivo ndivo vanozivikanwa uye vashandisi vewebhu mukati meGnu / Linux nyika. Uye ndidzo zvakare dzakakurumbira dzinokutendera kuti ubvise yako yekubhurawuza nhoroondo. Pachine mabhurawuza ewebhu asingatenderi iwe kudzima iyo nhoroondo sezvo isinga chengete kana iine nhoroondo. Mhosva yakabata pfungwa dzangu ndeye Min, isina huremu webhu bhurawuza iyo hauna nzira yakajeka yekujekesa nhoroondo (zvirinani kuti handina kuiwana kana kumboiona mune yeGithub repository) uye senge iyi webhurawuza, vamwe vazhinji havatenderi.
Chero zvazvingaitika, kubva pano tinokurudzira kudzima nhoroondo nguva nenguva kana kuimaka saizvozvi mukati mewebhusaiti kuitira kuti chirongwa chedu chisanonoka zvakanyanya, nekuti kana tikachishandisa zvakanyanya, mushure memwedzi tinogona kunge takanyoresa kupfuura a chiuru mapeji uye kana rimwe nerimwe riine 1 mb, tinogona kuva ne1 Gb nzvimbo iyo inofanirwa kufambisa Linux yedu uye yedu yewebhu browser, saka kurudziro yedu uye iyi dzidziso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Maitiro ekudzima nhoroondo yewebhu webhu
Madrid inovhura mikova yayo kune Mahara Software neiyo itsva vhezheni yeOpenExpo Europe
Microsoft inotenga GitHub ye $ 7.500 bhiriyoni